ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးများ စုစည်းမှု ( ဒုတိယပိုင် ♥♥♥). Credit to Uploaders | OKKALA STORE
အဲဒီလိုနဲ့ဗျာ...မနက် ၂း၃၀ လောက်အထိ..ချစ်လိုက်ကြတာ..၃ ကြိမ်လောက်..ပွဲကပစ်လိုက်တော့တယ်။
အ၇င်ေ၇းနေတာ မပြီးသေးပေမယ့် အခု ပြောပြချင်တာလေးကို မအောင့်နိုင်တော့လို့ကြားဖြတ်ေ၇းပေးလိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကာလကပေါ့။ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ သင်္ကြန်ေ၇ာက်တိုင်းေ၇ာဂါထနေကျလေ။မလည်၇၇င် မနေနိ်ုင်တာပေါ့။ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင်လိုက်တော့ မန္တလာမြို့ တော်မှာ သွားကဲမယ်ပေါ့။မန္တလေးက သူငယ်ချင်းတွေဆီလည်း ချိတ်ပြီးပြီ။သူတို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ နဲ့အပြတ်ကဲမယ်ပေါ့။အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်း အားလုံး သဘောတူတာက ဘဲတွေချည်းပဲတော့ မသွားချင်ကြတာလေ။အဲဒီတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိုယ့်အတွဲလေးတွေခေါ်ကြတာပေါ့။သူတို့ မိဘတွေကလည်း အဖေါ်မိန်းကလေးတွေပါတာ၇ယ်၊ငယ်ငယ်ကတည်းက တမြို့ တည်းနေပြီး ခင်မင်နေကြတာတွေကြောင့် စိတ်ချပုံ၇တယ်။လိုက်ခွင့်ပေးကြတယ်။ကျွန်တော်၇ယ်၊ကိုဖြိုး၇ယ်၊အောင် ကြီး၇ယ်၊ဝင်းနိုင်၇ယ်၊ဖွန်ကြောင်ဖို့ ၊အပျော်အပါးသွားဖို့ ဆို၇င် တေ၇းနိုးတောင် ထလိုက်တဲ့ ကားပိုင်၇ှင် မျိုးသက်၇ယ်ပေါ့။နောက်ဆက်တွဲလေးတွေက ကျွန်တော့်လက်၇ှိစော်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးမျိုး၊အောင်ကြီးစော် ဝင်းပပ၊ဝင်းနိုင်စော် ငယ်ငယ်ပေါ့။(အမည် လွှဲေ၇းထားပါသည်။)ငယ်ငယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြ၇၇င် ကျွန်တော့်၇ဲ့လက်ဟောင်းလေးပါ။တချိန်ကတော့ ချစ်သူတွေ အခုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေပေ့ါ။သူကပဲ ပြောင်းလဲခဲ့လို့ဝေးခဲ့၇တာပါ။ကျွန်တော်နဲ့ တွဲနေတုန်း ဘော့စိ တစ်ယောက်၇ဲ့သားကို ပြောင်းပြီး ချစ်ခဲ့သူပေါ့။ကျွန်တော်ဘဝမှာ ၇ှား၇ှားပါးပါး ကျန်၇စ်ဖြစ်ခဲ့၇တာပေါ့။ဝဋ်လည်တာထင်တယ်။အဲဒီဘဲက ဝါးမြိုပြီး ဝအီတော့မှ ဝင်းနိုင်ကို ဖမ်းဆွဲထားတာလေ။ဝင်းနိုင်ကတော့ ဒါတွေမသိဘူး။သောက်ဖို့ လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားတာလေ။ကျွန်တော့်မှာ ပြော၇ခက်တာနဲ့မတားခဲ့ပါဘူး။ဒါတောင် ဝင်းနိုင်နဲ့ တွဲတော့ ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပြီးဆုံ၇တယ်။တွေ့ တိုင်းတစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လုံး၇ွဲကြီးတွေနဲ့ကြည့်တတ်သေးတယ်။မနဲနောက်ဆုတ်ပြီးေ၇ှာင်ထား၇တယ်။ဒီလိုနဲ့ မျိုးသက်၇ဲ့ပုဇဉ်းခေါင်း အပြာလေးနဲ့ ပေါ့။ကားပေါ်ကို ဘီယာချမ်းတွေ ဖာလိုက်တင်၊အပြင်း red level တွေ ဖာလိုက်တင်၊အမြီး အခြောက်အခြမ်းတွေတင်ပြီး အကြို ညနေမှာ ထွက်ခဲ့တာပေါ့။မြို့ ပြင်ထွက်ပြီး ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး။ကားမောင်းတဲ့ မျိုးသက်က လမ်းဘေးက ထန်း၇ည်ဆိုင်ေ၇ှ့ ထိုး၇က်ပြီး ထန်း၇ည်စစ်စစ်သောက်ချင်တာဆိုပြီး ဝင်သောက်ပါလေေ၇ာ။ခက်ပြီ။လူလွတ် ကိုဖြိုးနဲ့မျိုးသက်ကတော့ အတွဲညီနေပြီလေ။ငမ်းစ၇ာစော်မှ မပါတာ။အဲဒီတော့ အကုန်ဆင်းပြီး ဝင်နွဲ၇င်း အဖော်ပြုပေးကြ၇တာပေါ့။ကိုယ်တော်နှစ်ယောက်က သောက်၇င်းသောက်၇င်း မထတော့ဘူး။ဆိုင်ထိုင်နေတာကို ပဲ နှစ်နာ၇ီ သုံးနာ၇ီလောက်၇ှိပြီ။ည ဂ နာ၇ီလောက်ပေါ့။ကိုယ်တော်တွေက အမြန်လမ်းပေါ်ကသွားမှာ။ဘာမှ မကြာဘူးဆိုပြီး သွားဖို့စိတ်ကူးကို မ၇ှိဘူးဗျ။စော်တွေကလည်း ဆာတယ်ဆိုပြီး ထန်း၇ည်ဆိုင်က ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့လက်ဖက်သုတ်နဲ့ညစာစားမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ အတွဲပါတဲ့ ယောက်ျားလေး သုံးယောက်ကလည်း အဖော်လုပ်သောက်၇င်း မှန်နေပြီ။ခ၇ီးဆက်ဖို့စိတ်ထဲ မှာ မ၇ှိတော့ဘူး။သောက်ကောင်းစားကောင်းနေတာလေ။အဲဒီမှာ မျိုးမျိုးက စဖောက်လာတယ်။သူတို့ တောင်သောက်နေတာ။ငါတို့ လည်းပျင်းတယ်။သောက်၇အောင်ဆိုပြီး ကားပေါ်က ဘီယာတွေယူလာပြီး အတူထိုင်သောက်ကြတာ။မှာထားတဲ့ ထမင်းတွေတောင် မစားတော့ဘူး။အမြီးနဲ့ အိုကေနေကြတာ။
တလောက ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေး ပြင်ဖို့ ကန်ထရိုက်နဲ့ ချိန်းထားတာကြောင့် မနက်စောစော အဲဒီအခန်းကို သွားဖြစ်တယ်လေ။ အခန်းက ဈေးနီး၊ ကားဂိတ်နဲ့နီးနေတော့ ဖြတ်သွားဖြစ်လာတွေ အတော်များတယ်ပေါ့။ ပိုပြီး နီးတာက ဈေးဗျ။ မနက် ၈ နာရီမထိုးခင်ကတည်းက အဲဒီအခန်းကိုရောက်၊ အခန်းက ၃ လွှာဆိုတော့ သိပ်ပြီး မမြင့်ဘူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်း ၀ရန်တာမှာ မတ်တပ်ရပ်နေပြီး ချိန်းထားတဲ့ သူတွေကို စောင့်ရင်း လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို အပေါ်စီးကနေ ငေးကြည့်နေမိတာ။ ဟမ်မလေးနော်...... နို့သည်တွေ နဲတာမဟုတ်၊ အားရလိုက်တာ။ ပြောချင်တာက ဒီလိုဗျာ.....ဈေးကိုလာကြတဲ့သူ အများစုက အိမ်ထောင်သည်တွေလေ။ မနက်ပိုင်း ထမင်းချိုင့်အမှီချက်ရမှာဆိုတော့ ကသုတ်ကယက် ဖရိုဖရဲ အင်္ကျီပွပွ လည်ပင်းဟိုက်ဟိုက်တွေက အများသားလေ၊ အဲဒီတော့ ကျနော်က အပေါ်စီးကနေ ကြည့်နေတာဆိုတော့ အင်္ကျီအဟိုက်ကြားကနေ နို့လေးတွေဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဗျာ။ အထပ်ကလည်း သိပ်မမြင့်ဆိုတော့ မြင်ကွင်းက ကြည်လင်တယ်၊ ပြတ်သားတယ်။
စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ ကြည်နူးတယ်၊ မနက်ခင်းမှာ သာယာတယ်။ မြို့လယ်မှာ နို့သည်တွေ အားကြီးပေါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုက်ခန်းမှာ လုံးဝဥသုံ အခြေချနေထိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုးစိုးပတ်စက် ချလိုက်တော့တယ်။ ဘော်ဒါတို့ အားကျပြီး လိပ်စာတော့ လာမမေးနဲ့ အသေသာသတ် မပြောပြဘူး။ (ရေကျော်ထဲမှာ..................)
ဒီလို သောက်ကြ၇င်း တော်တော်လေး ဥာဉ်နက်လာပြီ။တော်တော်လည်း မှန်နေကြပြီ။ကားမောင်းတဲ့ မျိုးသက်ဆို ခေါင်းတောင်မထောင်နိုင်တော်ဘူး။ဒါပေမယ့် ထန်း၇ည်ဆိုတော့ ၇ိုး၇ိုး အ၇က်မူုးသလို ငြိမ်ငြိမ်တော့မူးတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးယိမ်းဒီယိမ်းပေါ့။ကိုဖြိုးကလည်း ထူးမခြားနားပေါ့။၉ နာ၇ီလည်းကျော်နေပြီ။မန္တလေးကို စောစောေ၇ာက်မှ အိပ်ချိန်၇မှာလေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောင်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဝိုင်းအမြန်သိမ်းပြီး ထွက်ဖို့ လုပ်တယ်။ခက်တာက မောင်းမယ့်သူက သူ့ ကိုယ်သူတောင် မနိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်း သူ့ လောက်အခြေအနေ မဆိုးပေမယ့် များနေပြီ။ဒါနဲပဲ ဝင်းနိုင်က သူပဲမောင်းမယ်ဆိုပြီးေ၇ှ့ ခန်းထဲ မှာ သူ့ စော်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ လည်း light truck ၇ဲ့နောက်ခန်းထဲ ငမူးနှစ်ကောင်ကို မနည်း ဆွဲတင်ပြီး အဆင်ပြေသလို ထိုင်ကြတာပေါ့။စော်တွေကလည်း တော်တော်လေးကောင်းနေတာ။သူတို့ လည်း ခ၇ီးဆောင်အိပ်တွေကို နေ၇ာချပြီး ကိုယ်စီကိုယ်စီ လှဲလိုက်လာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကောင်းကင်ပေါ်က ကြယ်လေးတွေကို ငေးမောကြည့်၇င်း ပက်လက်လှန်ပြီး လိုက်လာတာ မူးနေတဲ့ အ၇ှိန်နဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားလည်း မသိလိုက်ဖူး။အိပ်မက်လိုလို ဘာလိုလို ခံစားမှု တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်နိုးလာတယ်။ကျွန်တော်ညီလေးမှာ ပူနွေးနွေး အ၇သာနဲ့ လှုပ်၇ှားနေတဲ့ အ၇သာပေါ့။ကျွန်တော်လည်း အစတော့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်မှ ညီလေး ကလိခံနေ၇တာကိုး။ခေါင်းထောင်မကြည့်ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း အသိတ၇ားစုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားကြည့်တော့မှ ကားကလည်း ၇ပ်နေတယ်။အားလုံးလည်း မှောင်မဲ တိတ်ဆိတ်နေတာ။ကြယ်ေ၇ာင် လေ၇ာင် လေးပဲ၇ှိတယ်။ညီလေးကလည်း တင်းနေပြီ။အ၇သာကတော်တော်ကောင်းနေတာကိုး။ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူလည်း စဉ်းစားပြီး ပက်လက် ဇိမ်ခံနေတာကိုး။တော်တော်ကြာတော့ ကျွန်တော့်ပေါ်ကို တက်ခွပြီး ညီလေးကို တွင်းထဲ ထည်းတာသိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မျိုးမျိုးပေါ့။ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါ်ကနေ ဆောင့်နေတာ။ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့နို့ တွေကို အောက်ကနေ ပင့်ပြီး နယ်ပေးနေတယ်။တော်တော်ကြာတော့ သူက ကျွန်တော့်ပေါ်ကို မှောက်ချပြီး နားနားကပ်ပြောတယ်။အပေါ်ကနေလုပ်ပေးတဲ့။ကျွန်တော်လည်း သူ့ ကို နေ၇ာဖယ်ပေးလိုက်တော့ သူက ကျွန်တော်လှဲအိပ်တဲ့ နေ၇ာမှာ လေးဖက်ထောက်ပေးတယ်။ကျွန်တော်လည်း နောက်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်ပေးနေတာ။ဘေးလူတွေ နိုးမှာစိုးလို့ ။ကျွန်တော်တို့ ဘေးမှာ မျိုးသက်၇ယ်၊ကိုဖြိုး၇ယ်က တစ်ဖက် ဝင်းပပကတစ်ဖက်ပေါ့။အောင်ကြီးကတော့ နောက်ဖျားမှာ တစ်ယောက်တည်းအိပ်နေတာ။လေးဘက်ကုန်းတွယ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နောက်ကျောမှာပေါ့။ပြောပြနေတာက မြင်လွယ်အောင် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆိုပေမယ့် ညီညီညာညာ၇ှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ကပိုက၇ို ကစဉ့်ကလျားပေါ့။မျိုးမျိုးလည်း ကျွန်တော့်ဆောင်ချက်တွေမှာ တော်တော်ကောင်းလာပုံ၇တယ်။ခေါင်းကို ထောင်မထားနိုင်တော့ဘူး။အောက်ကို စိုက်ဆင်းနေတယ်။ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆောင်၇င်း ဖီလ်းယူနေတာပေါ့။တော်တော်ကြာမှ သတိထားမိတယ်။မျိုးမျိုးခေါင်းက ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ထက်အောက်လှုပ်နေတယ်။သေချာကြည့်တော့မှ သူ့ ခေါင်းက ဆောင့်တဲ့ အ၇ှိန်ကြောင့်လားတော့မသိဘူး။ဖြည်းဖြည်းချင်းစောင်းသွားပြီး အောင်ကြီး ငမူးကောင်ပေါင်ပေါ်ေ၇ာက်နေတာ။၇ိုး၇ိုးေ၇ာက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ ညီလေးကို ပုဆိုးပေါ်ကနေ ငုံပေးနေတာ။ကျွန်တော် စိတ်တော်တော်လေး လှုပ်၇ှားသွားတယ်။ဒါနဲ့ ဘေးက ဝင်းပပကို ကြည့်လိုက်တော့ ကပိုက၇ိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဘက်စောင်းအိပ်နေတာ။ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့သူ ၇င်သားတွေပေါ်ကို လက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီး ဆုတ်နယ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာသံမှ ထွက်မလာဘူး။အခြေအနေကောင်းတာနဲ့၇ဲ၇ဲပဲ ဆုပ်နယ်ပေးနေတယ်။မျိုးမျိုးလည်း ပုဆိုးကို ဘယ်လို ဖြည်လိုက်လည်း မသိဘူး။ခါးကနေ အောက်ကို အောင်ကြီး ညီလေးပေါ်၇ုံ လျှောကျနေပြီး အပီ ငုံစုပ်နေတာ။သူကတော့ ကျွန်တော် မသိဘူး၊ မမြင်ဘူး ထင်မှာပေါ့။၇ှယ် မှုတ်ပေးနေတာ။ဆောင့်ချက်တွေကလည်း ပြင်းလာတယ်။ဝင်းပပ ဆီကလည်း ဘာသံမှ မကြား၇တာနဲ့၇ှယ် နယ်ပေးနေတာပေါ့။ကားလေးလည်း တငြိမ့်ငြိမ့် လှုပ်နေတာ။
ခါတိုင်းချိန်းတွေ့ ပြီး လုပ်၇တာနဲ့မတူဘူး။လူကြားထဲ ခိုးလုပ်၇တာဆိုတော့ ပိုဖီလ်းလာတယ်။ဒါပေမယ့် တော်တော်နဲ့မပြီးဘူးဗျ။ကျွန်တော်က လုပ်ချင်တာတွေ များပြီး ဗျာများနေတာ။ဝင်းပပလေးကိုလည်း နို့ တင်မကဘူး ဖုတ်ဖုတ်ကလေးပါ ကလိပေးချင်သေးတာလေ။ကျွန်တော်ကတော့ ဝင်းပပ နိုးနေပြီလို့ ယုံထားတယ်။ဒီလောက် ကားပေါ်မှာ သောင်းကျန်းနေတာ သူမနိုးပဲ နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ။တကယ်လည်း နိုးနေတာ။ဘယ်လိုသိလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် မာန်တက်ပြီး သူ့ နို့ ကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဖိညစ်လိုက်တော့ အင့်ဆိုပြီး တွန့် သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း နောက်ကဆောင့်နေ၇င်း ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်နေတာကို ဝိုးတဝါး မြင်လိုက်တယ်လေ။မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်တယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်း အောက်ကို လျှောပြီး ထမိန်ပေါ်ကနေ အဖုတ်ကြားထဲ ပွတ်ပေးတော့ နဲနဲ ကြာတော့ ပေါင်လေး ပိုပြီး ဟပေးလာတယ်။မျိုးမျိုးက ကျွန်တော်နှေးသွားလို့ ထင်တယ်။နောက်ကို ဖင်ကို ပိုပြီး ဆုတ်လာတယ်။အခွာမခံဘူး။ပါးစပ်ကလည်း မျိုးသက်လီးကို မချွတ်ဘူး။တော်တော်ထန်နေတာ။ကျွန်တော့်လက်တွေကလည်း ဝင်းပပ၇ဲ့ထမိန်ပေါ်ကနေ အောက်ထဲေ၇ာက်သွားပြီး ဖုတ်ဖုတ်ကို ကလိ၇င်း လက်ချောင်းလေးတွေ ထိုးထည့်ပေးနေတာလေ။တော်တော်ကြာတော့ မျိုးမျိုးက နောက်ကို ဇွတ်ဖိကပ်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ညစ်လာတယ်။ပြီးတော့ေ၇ှ့ ကို ခေါင်းငိုက်ကျသွားပြီး ဖင်လေးပဲ ထောင်ကျန်နေတော့တာ။ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်လာတာနဲ့အာ၇ုံနှစ်ပြီး ဆောင့်လိုက်တော့ လ၇ည်တွေ ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ သူ့ ပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး ညီလေးကို ဖုတ်ဖုတ်ထဲက ထုတ်ပြီး ခါးကို ဘေးကိုစောင်းချလိုက်ပြီး ဝင်းပပ နှုတ်ခမ်းဘက်ကို တိုးပြီး ကပ်ပေးလိုက်တယ်။စိတ်တွေများ ထူးဆန်းတယ်နော်။မွှန်ထူနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူး အစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲ လုပ်လိုက်တာ။တကယ်ဆို သူများစော်လေ။ကြိုတင်ပြီး နားလည်းမှုယူပြီး ညှိနှိုင်းထားတာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ကံကောင်းတယ်။သူလည်း ကျွန်တော်လိုပဲ မွှန်နေတယ်ထင်တယ်။ညီလေးကို ငုံပေးတယ်။တော်တော်ကြာအောင်ငုံပေးပြီးတော့မှ ခွာသွားတယ်။သူလေး သနားပါတယ်။ခံချင်နေပုံ၇တယ်။ခက်တာက လုပ်လို့မဖြစ်ဖူးဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေး အမောဖြေပြီးတော့ အပေါ့သွားချင်တာနဲ့ကားအောက်ဆင်းလိုက်တော့မှ ကားက လမ်းဘေးကို ထိုးဆင်းပြီး ကားလမ်းနဲ့အပြိုင်မဟုတ်ပဲ ထောင်လိုက်ကျကျ ၇ပ်ထားတာ။ဒါပေမယ့် လမ်းဘေးတော်တော်ဝေဝေးဆင်းပြီး အပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာ ၇ပ်ထားတော့ ကားလမ်းနဲ့ တော့ တော်တော်လေးလှမ်းတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဝင်းနိုင်တို့ လည်း မူးမူးနဲ့ကားခေါင်းခန်းထဲ အိပ်နေတယ်ထင်တာနဲ့ကားေ၇ှ့ ခန်းဘက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ မ၇ှိဘူး။ဘယ်များသွားနေလဲ စဉ်းစားနေတုန်း ကားေ၇ှ့ နားလေးက အသံကြားတာနဲ့ လန့် သွားတယ်။မြွေပါး ကင်ပါးကြောက်တာနဲ့ကားပြတင်းပေါက်ကနေ လက်နှိုက်ပြီးေ၇ှ့ မီးကြီး ဖွင့်လိုက်တော့ အောင်မလေးလေးလေး............ကိုဝင်းနိုင်တို့ ကောင်းစားနေတာ။ကားေ၇ှ့ မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်စီနဲ့ဝင်းနိုင်ပုဆိုး အောက်ကခင်းပြီး ငယ်ငယ်က အပေါ်ကနေ ဆောင့်နေတာ။မီးလင်းသွားတော့ နှစ်ေ၇ာက်လုံးက ပိတ်လိုက်ဆိုပြီး အော်ကြတာ။ဝင်းနိုင်က ထ မယ်လုပ်တယ်။ငယ်ငယ်က မီးပိတ်ဖို့ သာပြောတာ ထဖို့ စိတ်ကူး၇ှိဟန်မတူဘူး။ဖိထားတယ်။ပြီးတော့မှ ဘယ်သူလဲတဲ့။မေးသာမေးတာ။တလှုပ်လှုပ် လှုပ်နေတဲ့ နို့ နှစ်လုံးကို လုံးဝမကာဘူး။ကျွန်တော်လည်း ငါကတော့ ပျောက်လို့ လိုက်၇ှာနေတာ။ဒီမှာဇိမ်ကျနေတာကိုးဆိုပြီး မီးပိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် မနေနိုင်ဘူး။ေ၇ှ့ က မီးသေးတွေဖွင့်လိုက်တယ်။ဝင်းနိုင်က ခွီးပဲ ဟေ့ကောင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီး ဆဲတယ်။ငယ်ငယ်ကတော့ ကျွန်တော်မှန်းသိသွားလို့ လားတော့ မသိဘူး။အဆောင့်တောင် အ၇ပ်တော့ဘူး။လှည့်လည်း မကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာ သူ့ အတွက် ထူးမှ မထူးဆန်းတော့တာကိုး။ဟိုကောင် ဝင်းနိုင်ကသာ ဇွတ်ပဲ မီးပိတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ် ပြောပြီးဆဲနေတော့တာ။ကျွန်တော်က မင်းတို့ မြွေကင်းအန္တ၇ာယ် ကင်းအောင်လို့ ပါ။ငါမြင်ပြီးပါပြီကွာ ဆက်လုပ်ပါ။ငါလည်း ကြည့်၇တာပေါ့ဆိုပြီးပေပြီး မီးပိတ်မပေးတော့ဘူး။ဝင်းနိုင်လည်း ပြောလို့ မ၇တော့မှန်းသိသွားလို့ ထင်တယ် မင်းပြီးမှ သိမယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းပြီး အောက်ကနေ ပင့်ပေးနေတာ။တော်တော် ဟန်ချက်ညီတယ်။တော်တော်ကြာတော့ ငယ်ငယ်ပြီးသွားလို့ လားမသိဘူး။ဝင်းနိုင်ပေါ် မှောက်ချပြီး မှိန်းနေတယ်။ဟိုကောင် အူကြောင်ကြောင်ကသာ ကျွန်တော်ဆီလာဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။မ၇ပါဘူး။စော်က ဖိထားတာကနေ ဖယ်ကို မပေးဘူး။တော်တော်ကြာမှ စော်ကထပြီး ချွတ်ထားတဲ့ စကတ်ကို ကောက်စွပ်တယ်။အောက်ခံကို မဝတ်တော့ဘူး။မြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ နေ၇တယ်။ဖင်ပေးပြီး ကုန်းပြီး ဝတ်တာ တင်တွေက ပြူးကားနေတာပဲ။ဝင်းနိုင်လည်း အဲဒီတော့မှ ထလာနိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ကို အပီ ဆဲနေတာ။စ စချင်းသာ ထလို့ ၇မယ်ဆို ထထိုးမယ့်သဘော၇ှိတယ်။ အခုတော့ တော်တော်ကြာမှ ထလို့ ၇တာ ဆိုတော့ ဆဲ၇ုံပဲ။
မနေ့ညက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘောလုံးပွဲကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး လာခေါ်လို့ မင်္ဂလာဂါးဒင်းမှာ သွားအိပ်တာ။ အဲ့မှာ သူယူထားတဲ့ အခန်းရှိတယ်လေ။ မနက်ကျ သူ့စော်(ကကလားမသိပါဘူးဗျာ)လာမှာမို့ဆိုပြီး နောက်တစ်ခန်းထပ်ယူလိုက်တယ်။ အခန်းနှစ်ခန်းက ကော်နက်တင်းဒေါရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းက လော့ခ်မချနဲ့ စေ့ပဲစေ့ထားလို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့သူ့စော်ကို လုပ်ရင်းတံခါးကနေ ဖွဖွလေးဝင်ခဲ့ဖို့မက်စေ့ပို့လို့ အသာလေး ဝင်သွားတာသူ့ဆော်ကိုမျက်လုံးမမြင်အောင် စည်းထားပြီး ကေုတင်ပေါ်မှာ လေးဖက်ထောက်ခိုင်းထားတာ။ ပြီးတော့သူက နောက်ကနေပစ္စည်းနဲ့ ပွတ်ပေးနေတာဗျာ။ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရင်း ဟန်းပလေးပြီးမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ လိုက်ဖ်ရှိုးပဲ။ ပြီးမှမေးကြည့်တော့ သူ့စော်ကသိတယ်တဲ့ ကျွန်တော်ကြည့်နေလို့ ပိုတောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုပဲ။ နောက်တစ်ခေါက်ဆို ငါပါဝင်ဆွဲပြီလို့ သူငယ်ချင်းကိုပြောထားတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့မမတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ မမက အသက် ၃၀လောက်ရှိပြီ။ အသားဖြူဝင်းဝင်းလေး အိုးလေးကကားတယ် နို့ကအကြီးကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သေးတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး။ တစ်ခါတလေ အကျီင်္အဟိုက်တွေဝတ်ရင် နို့လေးတွေပေါ်နေတာရည်ရည်လည်လည်မိုက်တယ်ဗျာ။ မျက်နှာကယောကျာင်္းလေးတွေကြိုက်တဲ့မျက်နှာမျိုး ခေတ်မှီပုံစံ။ ကျွန်တော်နဲ့စပြီးပတ်သက်ဖြစ်တာတွေပြောရင်တော့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေဖြစ်နေဦးမယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုပဲသာမန်ခင်နေကြရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ မမနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေချောင်းသာသွားဖို့အတွက် ကျွန်တော့်အိမ်ကကားနဲ့အငှားလိုက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကားမှာက ၅ယောက် မမရဲ့ကားမှာက ၃ယောက်ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ယောကျာင်္းတစ်ယောက် စုစုပေါင်း ၈ယောက်။ ချောင်းသာရောက်တော့ သူတို့အဖွဲ့သောင်းကျန်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လဲရေဆော့သလိုလိုနဲ့ မမကိုရှိုးတာပေါ့ဗျာ။ ဖြူဝင်းနေတဲ့ပေါင်တံလေးနဲ့ အကျီင်္အနက်ဂျိုင်းပြတ်အဟိုက်လေးနဲ့ တကယ်ကိုလုပ်ချင်စရာဗျာ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ရေထဲမှာတင်မမကိုကြည့်ပြီးဂွင်းထုမိတယ်။ ရေဆော့နေတဲ့အချိန်တစ်ချက်တစ်ချက်နို့ကြီးပေါ်လာတာများ
တကယ်ကိုစုပ်ချင်စရာကြီးဗျာ။ အဲဒီနေ့ညက မီးပုံပွဲလုပ်ကြတာ ကျွန်တော်လဲသူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ယောကျာင်္း ကိုစိုးကြီးနဲ့အတူဝိုင်းကူလုပ်ရင်းပျော်နေကြတာပေါ့လေ။ ညကြတော့ သူတို့အုပ်စုတွေအနှိပ်ခံဖို့အတွက်အနှိပ်သည်ခေါ်ထားလို့ အနှိပ်ခံကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ညနေကနှိပ်ဖို့ခေါ်တုန်းက မမကဦးဆောင်ပြီးခေါ်ပေမယ့် တကယ်နှိပ်တဲ့အခါကြတော့ အနှိပ်သည်တွေကသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်မရှိလို့တဲ့ သူကအနှိပ်မခံဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ အခန်းပြန်ကြတဲ့အခါကြတော့ အရဲစွန့်ပြီး မမ အရမ်းညောင်းနေရင် ကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်လေအားမနာပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ မမက ဟာ .. မလုပ်ပါနဲ့ အသားလွတ်ကြီးမခိုင်းချင်ပါဘူး နေပါစေလို့ငြင်းတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ပြန်သွားလိုက်တယ်။ နောက်နာရီဝက်လောက်နေတော့ သူခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော့်ဆီလိုက်လာပြီး မမက နှိပ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့ပါလို့မှာလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ သွက်သွက်လေးပဲ
ထလိုက်သွားလိုက်တယ်။ အိပ်ယာပေါ်မှာဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ အသားလေးကိုဖြူဝင်းပြီး အခန်းအပြင်ကလာတဲ့အလင်းရောင်နဲ့တင်ကြည့်ရတာကျွန်တော် လီးတော်တော်တောင်နေပြီ။(အဲဒီအကြောင်းကို connection ကောင်းမှ သပ်သပ်ထပ်ရေးဦးမယ်)။ အဲဒီမမရဲ့အကောင့်က yokesoema.83@gmail.com ပါ။ သူ့မှာ ယောကျာင်္းလေးသူငယ်ချင်းတွေလဲရှိတယ် ထူးခြားချက်ကအဲဒီဘဲတွေအကုန်လုံးကအမိုက်စားတွေဗျ။ သူကပဲအဲဒီလိုမျိုးပဲရွေးပေါင်းတာလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင် သူတို့တွေလဲ မမကိုစားချင်နေကြမှာပဲ။ သူကယောကျာင်္းနဲ့ကွဲနေတာ ၃နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်။
ကဲ .... ဘော်ဒါတို့ထဲက ရူပါတို့ ဘော်ဒီတို့လန်းတဲ့ အစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ညီပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေနိုင်မယ့်သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အကောင့်ကိုဖောက်သည်ချလိုက်ပြီ။ တာဝန်ကြေတယ်နော်။
ြှီပီးတော့မှ ငယ်ငယ်က နင်တစ်ယောက်ပဲ နိုးတာလားတဲ့။ကျွန်တော်လည်း အေး ဟုတ်တယ်။ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေ တွေ့ သွားမှာစိုးလို့ တဲ့။ကျွန်တော်လည်း ဘာအခုမှ တွေ့ မှာစိုးတာလဲ။စောစောကတော့ ဘေးမှာလူ၇ှိတာတောင် ဂ၇ုမစိုက်ပဲနဲ့ ဆိုတော့ ၇ီပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို လှမ်းထု၇င်း နင့် မကြိုက်ဖူးလာတဲ့။ငါက အညော်ခံပြီး၇င် စား၇မှဟ။မဟုတ်၇င် နင်တင်တင်ကြီးဆိုတော့ ကောင်စုတ်တဲ့။ကျွန်တော် ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ကျွေးချင်ဖူးလားဆိုတော့ မပွင့်တပွင့်နဲ့ နောက်တော့ပေါ့တဲ့။ပြော၇င်း ညီလေးလည်း ထောင်လာတာ။သူကလည်း ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော့်ဘေးကနေ ဖြတ်ပြီး ကားဆီထွက်တာ လက်က အငြိမ်မနေဘူး။ညီလေးကို ပုတ်သွားတယ်။ဝင်းနိုင်လည်း အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နားေ၇ာက်လာတယ်။မင်းတော်တော်ယုတ်တယ်။သိမယ်။မင်းအလှည့်ကျမှတဲ့။ကျွန်တော်တို့ လည်း ကားဆီပြန်လာတော့ မျိုးမျိုးနဲ့ငယ်ငယ်က တီးတိုးပြောပြီး ၇ီနေတယ်။အဲဒီမှာ ဝင်းနိုင်က ဟေ့ကောင် မင်းမောင်ခဲ့။ငါတို့ နောက်ကလိုက်မယ်တဲ့။ကျွန်တော်လည်း ဒါဆို ငါနဲ့ တစ်ယောက်တော့ေ၇ှ့ လာခဲ့ကွာ။ငါတစ်ယောက်တည်း ပျင်းစ၇ာကြီးဆိုတော့ မျိုးမျိုးထွက်လာတယ်။အဲဒီလိုနဲ့မောင်းလာတာ တော်တော်လေး မောင်းလိုက်တော့ အမြန်လမ်းပေါ်ေ၇ာက်လာတယ်။အချိန်ကလည်း ၁၂ နာ၇ီထိုးတော့မှာ။လမ်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့မျိုးမျိုးလည်း စောစောက ဝင်းနိုင်တို့ အကြောင်းပြောလာတာ။မျိုးမျိုးကမေးတယ်။နင်သူ့ ကို ပစ္စည်းနဲ့ ထောက်တယ်ဆိုတဲ့။ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟာ.........မဟုတ်တာဆိုတော့ သူကပြောတယ်။နင် ဘာလို့ ထောင်နေတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်ကို လျှောက်ပြောလိုက်လို့ စိတ်ချင်ပေါက်ပေါက်နဲ့သူတို့ လိုးနေတာ မြင်နေ၇တာ မထောင်ပဲနေပါ့မလား နင်လည်းမြင်တယ်မလားဆိုတော့ အင်း.......မှန်ထဲက မြင်၇တယ်တဲ့။တည့်တည့်ပဲတဲ့။နင်ကော ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ မဖြေဘူး။၇ီနေတယ်။ဝင်းနိုင်ပစ္စည်းက မိုက်တယ်နော်။မကြိုက်ဖူးလားဆိုတော့ ကြိုက်စ၇ာလားတဲ့။မ၇ှက်ပါနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါဆိုတော့ ဒီလိုပါပဲတဲ့။မိန်းမတွေများ ဝေ့လည်လည် အားကြီးလုပ်။သူက ပြန်မေးတယ်။နင် ငယ်ငယ်ကို ဟိုဟာလုပ်ချင်နေလားတဲ့။ကျွန်တော်က နင်က ခွင်ပြုမှာလားဆိုတော့ ငြိမ်နေတယ်။ပြီးတော့မှ ခွင့်ပြု၇င် နင်က လုပ်မှာလားတဲ့။ကျွန်တော်လည်း ယောကျာ်းပဲ လုပ်မှာပေါ့။ဒါပေမယ့် ချစ်လို့ မဟုတ်ဖူးနော်။လုပ်ချင်တာသီးသန့် ပဲ။ငါချစ်တာက နင်တစ်ယောက်ပဲ ဆိုတော့ အဲဒီလိုဆို၇င်တော့ နင့်သဘောပါ။ငါ့ကို ချစ်၇င်ပြီးတာပဲတဲ့။ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကလည်း ကြွလာတာနဲ့နင်ကော တခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့မစမ်းချင်ဘူးလားဆိုတော့ ဟင့်အင်းတဲ့။ကျွန်တော် ၇ီချင်သွားတယ်။စောစောကတော့ မျိုးသက်ဒုတ်ကို အပီ စုပ်နေတာ။ကျွန်တော်လည်း ဒါဆို ငုံ၇ုံဆို၇င်ကောလို့ မေးလိုက်တော့ ဟာ.........မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့။ကျွန်တော်လည်း တင်းသွားတယ်။အဲဒါနဲ့ငါကမသိပါဘူးဟာ.........စောစောက ဒို့ လုပ်တော့ နင့်ခေါင်းက မျိုးသက်ဟာပေါ်ေ၇ာက်နေတော့ နင်များငုံပေးနေတယ်ထင်တာဆိုတော့ ဖြတ်ကနဲ ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်တယ်။နင်နော်.........ငါ့ကို တော်တော် အထင်သေးတယ်တဲ့။ကျွန်တော်က မဟုတ်ပါဘူးဟာ .........ငါတို့ တောင် တခြားစော်တွေ ပစ်မှားသေးတာ နင်တို့ လည်း အတူတူ ခံစား၇မယ်ထင်လို့ ပါ။အထင်သေးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။နင်လုပ်ချင်၇င်လည်း ငါ လက်ခံပါတယ်။နင်ပြောသလိုပေါ့ ငါ့ကို ပဲချစ်၇မယ်။ပြီးတော့ အသိပေး
၇မယ်ဆိုပြီး ဒိုင်လျှိုလေးတွေပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော် ထပ်မေးလိုက်တော့ ပြောတတ်ဖူးတဲ့။ကျွန်တော်လည်း ဆက်မပြောပါဘူး။နင့်သဘောပါလို့ ပဲ ပြောလိုက်တယ်။နောက်တော့ သူလည်း ဘေးမှာ အိပ်လိုက်လာတယ်။မန္တလေးေ၇ာက်တော့ ၂ နာ၇ီထိုးပြီးနေပြီ။သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ သူကေ၇တံခွန်တောင်က သူ့ ခြံမှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်ပြင်ထားတယ်။သူလည်း အဲဒီမှာ စောင့်နေတာတဲ့။ကျွန်တော်တို့သူ့ ခြံကိုေ၇ာက်တော့ သူက ကျွန်တော်တို့ အတွက်ပြင်ထားတဲ့ နေ၇ာမှာ နေ၇ာချပေးတယ်။ပြီးတော့ သူလည်း ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူအိပ်တယ်။
နောက်နေ့ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း မန္တလေးက သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေကို ခေါ်ပြီး လည်တာပေါ့။ကားပေါ်လူအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၁၅ ယောက်လောက်၇ှိမယ်။ကျွန်တော်လည်း မျိုးမျိုးနဲ့ခေါင်မိုးတန်းတွေကြားမှာ ၇ပ်၇င်း ခုန်လိုက်ပေါက်လိုက်ပေါ့။ကျွန်တော့်ေ၇ှ့ မှာ မျိုး မျိုးေ၇ှ့တစောင်းလေးမှာ ဝင်းပပ နဲ့မန္တလေးက သူငယ်ချင်းမလေးတွေပေါ့။ကားပေါ်မှာေ၇ပက်ခံ၇င်း မျိုးမျိုးကို ကလိလိုက် ထောက်လိုက်ဆုပ်လိုက်နယ်လိုက်ပေါ့။မျိုးမျိုးလည်း ကောင်းနေပုံ၇တယ်။တော်တော်ကြာတော့ ကျွန်တော်လည်း နယ်ကျူးချင်လာတယ်။ဝင်းပပကို မထိခလုပ် ထိခလုပ် နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်သတ်ပေးတာ။နောက်တော့ ပေါ်တင်ပဲ နှိုက်လိုက် ကိုင်လိုက်ပေါ့။စော်နှစ်ပွေနဲ့ဇိမ်ကျနေတာ။ကျွန်တော်က ဝင်းပပလေးကို တွယ်ချင်နေတာ။မစားဖူးသေးတော့ ပိုချို မယ်ထင်တာပေါ့.........ဟိဟိ............တော်တော်ကြာတော့ ဘေးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် နှိုက်နေတာကို မြမြက ကြည့်နေတာကိုး။ကျွန်တော်လည်း တွန့် သွားတယ်။၇ှက်လည်း ၇ှက်သွားတယ်။သူကတော့ ပြုံးစိစိ လုပ်ပြီး တဖက်လှည့်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် စိတ်ထိန်းပြီး ငြိမ်နေတာပေါ့။စိတ်ထဲမှာလည်း စဉ်းစားနေတာ။မြမြ အပြစ်တင်ချင်တဲ့ ပုံမပေါ်ဘူး။တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပဲပေါ့။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် သူ့ နားကို မသိမသာ ကပ်သွားတယ်။သူက လှည့်ကြည့်တယ်။ပြုံးပြတယ်။ပြီးတော့ နားနားကပ်ပြီး တော်တော်ဇိမ်ကျနေတယ်ပေါ့တဲ့။ကျွန်တော်လည်း သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ဒီဆော် ကျွန်တော် နှိုက်တာကို သိပေမယ့် ပြသနာ ၇ှာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ။နောက်ပြီး စော်က သူ့ ယောက်ျားစစ်ဗိုလ်နဲ့ဝေးနေတာလို့ သိထားတယ်။သူ့ ဘဲကေ၇ှ့ တန်းေ၇ာက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီလေ။ကျွန်တော်လည်းမှန်းသမ်းပြီး ပစ်လိုက်ဦးမှ။အဆင်ပြေ၇င် အမြတ်ပဲဆိုပြီး ပစ်မှတ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ဒီစော်က ပို တောင့်တယ်။ပိုပြီး sexy ဆန်တယ်။ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင့်တောင်ကြီးလေ။ကျောင်းမှာကတည်းက ကျွန်တော်တို့ က နန္ဒာလှိုင်လို့နာမည်ပေးထားတာလေ။မသိမသာနဲ့ အသားချင်းကပ်ထားလိုက်တယ်။ဘာမှမပြောဘူး။သူကတောင် တစ်ချက်တစ်ချက် ကသလို ခုန်သလိုနဲ့ ဖိကပ်လာတတ်တယ်။အိုကေပေါ့။ေ၇ှ့ ဆက်အဆင့်တက်တယ်။သူ့ နောက်ကို လက်နဲ့မထိတထိလုပ်ပေးတယ်။အိုကေတယ်။ဒါနဲ့မတော်တဆ ဖက်သလိုေ၇ပက်တာ ကာပေးချင်သလို နဲ့၇င်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်တာ အိုကေပဲ။တစ်ခါတော့ တော်တော်နဲ့ ပြန်မလွတ်ပဲ ဖက်ထားလိုက်တာ ဗိုက်ကို ဆိတ်ဆွဲသွားတယ်။ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြတယ်။နောက်တစ်ခါေ၇ပက်တဲ့အချိန် ဆွဲဖက်ပြီး ပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ေ၇ပက်တဲ့နေ၇ာကျော်တော့ လွတ်ပေးလိုက်တော့ အသာအယာပဲ ၇ုန်းထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ ၇ယ်ကျဲကျဲလုပ်နေတာ(ဘယ်လိုပြော၇မလဲတော့မသိဘူး။၇ီတာလည်း မဟုတ်ဘူး။တစ်မျိုးဗျာ။မိန်းကလေးတွေ ၇ှက်၇င် လုပ်လေ့၇ှိတဲ့ပုံပေါ့။ပြုံးတုံတုံ ခေါ်မလား၊ မခို့ တ၇ို့ ခေါ်မလား)။ကျွန်တော့်ဘက်တော့ လှည့်မကြည့်ဘူး။ဘေးတစ်စောင်းလေးပေါ့။လှလိုက်တာဗျာ။နောက်တစ်ခါေ၇ပက်တဲ့အချိန်ကျတော့ ကျွန်တော်သူ့ ကို ဆွဲဖက်ထား၇င်း သူ့ နောက်ကို နေ၇ာယူပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ နောက်ကနေ ခါးကို သာသာလေးဖက်ထားတာ။အိုကေတယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် သတိမထားမိတော့ဘူး။တစ်ချို့ လည်း မြင်ချင်မြင်လောက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ မွှန်နေတာ။ဒီလိုနဲ့ညီလေးနဲ့ ပွတ်သတ်ပေးလိုက် ၊ထောက်လိုက် လက်ကလည်း ပေါက်စီပေါ်ကိုေ၇ာက်ပြီး နယ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပေါ့။တော်တော်အိတာ။သူကလည်း လက်ကို ဖယ်မချဘူး။တော်တော်ကြာတော့မှ နောက်ကို ခေါင်းလှန်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောတာ။နင် မလွန်လွန်းဘူးလား။တွေ့ မေ၇ှာင်ပဲ။ကြောက်တောင်လာပြီတဲ့။အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း မျိုးမျိုးနဲ့ဝင်းပပကို သတိ၇တာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ လည်း နေ၇ာတွေေ၇ွ့ ကုန်ပြီ။မျိုးမျိုကိုတော့ ကောင်းကောင်းမမြင်၇တော့ဘူး။ဝင်းပပ ကတော့ နောက်တစ်ယောက်ကို အထောက်ခံ အပွတ်ခံ လုပ်နေတယ်။မတ္တ၇ာသားပေါ့။သူငယ်ချင်း
အတွေ.အကြုံဆိုလို.တစ်ခုတော.ဖောက်သည်ချင်သဗျာ...ကျနော်အသက် ၂၀ လောက်ကပေါ. ..လူကလဲထန်ထန်ဆိုတော.က
တွေ.သမျှအပျိုအအိုဘာလာလာအိမ်မက်မင်းသမီးလုပ်ပစ်တာပဲ. ...အဲ..မှတ်မှတ်၇၇ ၇ည်းစား၇တာကစတော.တာပဲဗျာ...
စော်က အသက်ကြီးတယ်...ကျနော်က၂၀..သူက၂၅ ..ဒါပေမ.ဲပါကင်...ဘယ်လိုသိလဲဆိုတာတော. ဆက်ပြောပြမယ်..
သူကခံချင်တယ်..ဒါပေမဲ.အ၇င်ကတွဲခဲ.တဲ.ကောင်တွေကို ကြောက်တယ.်...သူနဲ.၇ွယ်တူတွေဆိုတော.ကေ၇ဒီယိုဖမ်း..အင်ဂျင်ဝိုင်တိုင်းတာခံခဲ.၇တော.ဆာနေတယ်..ဒါဟာဘာဆိုတာသိချင်နေတယ်..ဒါပေမဲ.မပေးရဲဘူ...ကျနော်ကမနူးမနပ် ဆိုတော.သူကလဲဆ၇ာမကြီးအထာနဲ. စပြီးခေါ်သွားတာဂ၇င်းအိုက်စ်ကို...အဲမှာလုပ်စ၇ာ၇ှိတာကိုကျနော်လုပ်လို.၇သမျှ
မှာတော. ဂရင်းအိုက်စိနဲ.မတိုးတော.ပဲ..အကယ်ဒမီကိုသွားတာပေါ..အဲ.မှာစတာပဲဗျ..သူကပါကင်..ဟုတ်ပါတယ်.မှန်ပါတယ်..ကျနော်ကလဲ ဖာပဲချဘူးတာ..သူကကျနော်ကိုအချဉ်ထင်ပေမဲ. ..၇ည်းစားနဲ.ဆိုဘယ်လိုလုပ်၇မှန်းမသိ..ကြည်.ထားတဲ.အောကားတွေ၇ဲ.အကူအညီတွေ..နည်းပညာတွေနဲ.စဂျာတယ်ဗျာ..သူ၂ခါလောက်ပြီးသွားတယ်...ကျနော် လဲစထည်.ညီလေးလဲစ၀င်ေ၇ာ..ထုတ်ထုတ်...ဆိုတဲ.အသံနဲ.သွေးတွေ၇ဲသွားတာပဲ.. အဲ.မှာ သူုက၇ှုံမဲ.ပြီးပြောတဲ.စကားကိုအခုထိမမေ.ဘူးဗျ... ဘာတဲ..ခွေးသမင်မှတ်လို. တကယ်ကျား ...ကျားမှကျားဆိုးကြီးတဲ.ဗျာ.....အဲ.လိုမျိုးပါကင်ဖောက်ခဲ.ပြီးသကာလ..ကျနော်သည် အကယ်ဒမီမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ခဲ.ပါတယ်ခင်ဗျား....အခုတော.သူယောင်္ကျား၇သွားပြီ..လမ်းမှာတွေ.၇င်..ကျနော်ကို တိုက်ဂါး တိုက်ဂါးဆိုပြီးစပါတယ်..ကျနော်ကလဲဘော်ဒါလိုသဘောထားတော. အေးဆေးပေါ..တစ်ခါ လဲသူယောင်္ကျားေ၇ှ.မှာတိုက်ဂါးဆိုပြီး စတာ ....သူယောင်္ကျားနဲ. တောင်မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်...သူ.ယောင်္ကျားကျနော်ကို ဘာလို.တိုက်ဂါးလို.ခေါ်သလဲမေးတော...ဘီယာဆိုတိုက်ဂါးပဲသောက်လို.တယ်ဗျာ...ကျနော်လဲ၇ုပ်တည်နဲ.မှိန်းနေ၇တာပေါ.
အဲ ..အခုအချိန်မှာတော. ကျနော်နဲ.သူ၇ဲ. အကယ်ဒမီဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်တွေး၇င်း....အကယ်ဒမီမင်းသားကြိးခဗျာ ကြေကွဲနေ၇ပါကြောင်း.......................
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံတွေကတော့ အများကြီးပဲ အဲ့ထဲက မှ တလောက အဖြစ်အပျက်ပြောပြမယ်
တလောက ဗျာ ရုံးက Trip လိုက်ပို့တာ ချောင်းသာကို အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ အခန်းက အမ ၈ ယောက်ရယ် ကျွန်တော်ရယ်.... နောက်အခန်းက အမ၂ယောက် လူတော့ တော်တော်များတယ် သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး ကိုမှတ်မိချင်တဲ့သူပဲမှတ်ထားတယ်.......ဟိဟိ
ဖြစ်တာက ဒီလိုဗျ ချောင်းသာရောက်တော့ ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ယူတဲ့ဟိုတယ် က အခန်းက ၆ခန်းပဲရှိတယ် ကို့အခန်းက အမတွေကတော့ သူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူလောက်ပဲ ၁ဟိုတယ်တည်း တည်းချင်တယ်ဆိုလို့ အဲ့အမ ၁၀ယောက်က နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနဲ့ ကျွန်တော်က တော့ တစ်ခန်းပေါ့ဗျာ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အိပ်ရင်တစ်ယောက်တည်းပဲအိပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ အဖော်မခေါ်ဘူး ဟိုဘက်က ဟိုတယ် မှာကျန်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ ရောက်ရောက်ချင်းအခန်းယူပြီးတော့
ရေထဲစဆင်းမယ်ဆိုပြီးဆင်းကြတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ပင်ပန်းလို့ ခဏအိပ်နေတာ အဲ့မှာ အမ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့လို့ဆိုပြီ ကျွန်တော့်လာခေါ်တာ
ကျွန်တော်က လည်းတစ်ယောက်တည်းနေတယ်ဆိုတော့ လွပ်လွပ်လပ်လပ်အိပ်တာပေါ့ဗျာ တံခါးတောင်လော့ခ်မချထားဘူး........ကျွန်တော်အိပ်နေတာ ဘာဆိုဘာမှမသိဘူး .........ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်ကြည့်နေတယ်ထင်ပြီးမျက်လုံးမှေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲ့မှာ ဟိုအမက တံခါးဝမှာရပ်ပြီး ကြည့်နေတာကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရပ်နေတာလည်းဆိုတာသိချင်စိတ်နဲ့ အိပ်ချင်ယောက်ဆောင်ပြီးနေလိုက်တယ်......အဲ့ချိန်မှာ သတိထားမိတာက ကျွန်တော့်ညီလေးက အာကာသကိုပစ်မယ့်ဒုံးကျည် ကြနေတာပဲ မတ်လို့ ဟိဟိ သူကြည့်နေတယ် ဆိုတော့ ပိုတောင် မတ်ပြလိုက်သေးတယ်..... အဲ့မှာ သူက တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာ....... အနားရောက်တော့ သူက ကျွန်တော့်ကိုနိုးတယ် ..မောင်လေးထတဲ့ကျွန်တော် ပြန်မထူးဘူး ဆက်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တယ် သူ မိနစ်ဝက်လောက် နိုးတယ် ...... ကိုက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တာ ၁မိနစ်လောက်လည်းကြာရော သူက ညီလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုင်ကြည့်တယ်......ကိုက လည်းဂွင်ဆိုပြီးတော့ စောင့်နေလိုက်တယ် .......သူကိုင်ကြည့်နေတာများဗျာ မမြင်ဘူးတာကို အထူးအဆန်းမျက်လုံးနဲ့ကို ကြည့်နေတာ ကိုင်ရင်းကိုင်ရင်း ကျွန်တော်လည်း စိတ်က မရတော့တာနဲ့ အင်းအဲဆိုပြီးနိုးလိုက်တယ် ........ပြီးတော့သူ့ကိုအတင်းဆွဲဖက်ပြီး ကုတင်ပေးကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်ဗျာ..... ကိုက ကစ်စင်တွေပေးပြီးတော့ ခလုတ်တွေ တစ်ခုခြင်းလိုက်ဖြုတ်တာပေါ့ သူက ဘယ်အချိန်ထဲကဖီးလ်တက်နေလည်းမသိပါဘူးဗျာ.........မျက်လူံးကိုမပွင့်တော့ဘူး..... ကိုကလည်းသူ့ကို စိတ်ထဲမှာခဏခဏမှန်းနေရတော့ စိတ်ထဲမှာမှန်းတဲ့အတိုင်းဂျာတာပေါ့............ ပြီးတော့သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျွန်တော့်ညီလေးစထည့်တာ ဂျာထားတဲ့အရှိန်နဲက ထိတ်ဝကတော့ရှောရှောရှုရှုပဲ အဲ့မှာစတွေ့တာ ထိပ်ဝင်ပြီးထိုးတာတော်တော်ကျပ်နေတယ်ဗျာ.......... ကိုကလုပ်ချင်ဇောနဲ့ ထိုးလေမ၀င်လေပဲ....
အဲ့ဒါနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို သေချာဖြဲပြီးထည့်တော့မှ နည်းနည်းဝင်သွားတယ် ......ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းထဲ့နေရင်းနဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ အားနဲ့စောင့်ချလိုက်တာ ဘာပြောမလည်းဗျာ ထုတ်ထုတ် ဆိုတာ အခုထိနားထဲကကိုမထွက်ဘူး သွေးတွေလည်းထွက်တာလာတယ် အဲ့မှာ သူက ကြောက်လန့်ပြီးဆက်မလုပ်တော့ဘူးလုပ်လို့ အတင်းချော့ထည့်ရတယ်ဗျာ အရှိန်တက်လာတော့သူလည်း ဘာမှ ဆက်မပြောဘဲ ဖီးလ်ယူနေတာ သူကတော့ ၂ကြောင်းလောက်ပြီးသွားတယ် ကိုလည်း ဆက်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ ဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်တာ ကိုလည်းပြီးသွားတယ်..... နောက်၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကိုကနောက်တစ်ကြောင်းဆွဲမယ်ဆိုတော့ သူကတော်ပြီတဲ့ နင့်လာခေါ်တာတော်တော်ကြာပြီတဲ့ တမျိုးထင်ကုန်မယ်တဲ့ ညမှလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဗျာ.......... နောက်၃ရက်လောက်နေတာ သူနဲ့ ကိုညတိုင်းဆွဲဖြစ်တယ် အခု ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိပေါ့ဗျာ...... အခုတော့ ကိုက ဦးဆောင်စရာ မလိုတော့ဘူး သွားတိုင်းသူက ချည်းဦးဆောင်နေတာ
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်ပြီးတော့ guide ပြန်လုပ်တယ်။ Guide လုပ်တဲ့သက်တမ်း ၂ နှစ်လောက်မှာ အဖေ့ တပည့်ရဲ့တူမလေး တစ်ယောက် ကို guide လုပ်ပေးဖို့လာအပ်တယ်။ သူက တစ်နှစ်ကျပြီးသား။ ပုံစံလေးက ရိုးရိုးသားသားပုံလေး။ အရပ်က ၅' ၃" လောက်ရှိမယ် ပါးဖောင်းဖောင်းလေး။ အသား ခပ်လတ်လတ် နဲ့။ ဆံပင်က ပခုံးကျော်ကျော်လောက်။ အထူးခြားဆုံးက သူ့တင်သားတွေ။ ပုံစံအရမ်းလှတယ်။ အရမ်းကြီးတဲ့အထဲမှာမပါဘူး။ ပေါင်တံလေးတွေက သွယ်သွယ်လေးတွေ။ စပန့်ထမီလေးတွေဝတ်ရင် ပေါင်တံအလှနဲ့ တင်သားအလှက မြင်တဲ့သူတိုင်း တံတွေးနင်ချင်စရာ။
အဲဆက်ပြောပြမယ်။ သူနဲ့အတူ ကျွန်တော် guide လုပ်ပေးတာ နောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ယောက်က ယောက်ျားလေး ကျန်တစ်ယောက်က မိန်းကလေး။ ထားလိုက်တော့ သူတို့အကြောင်း။ ဟိုတစ်ယောက်အကြောင်းဆက်မယ်။
အစပိုင်းတော့ အေးဆေးပုံမှန်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စာသင်တာက စားပွဲမှာ ကုလားထိုင်နဲ့ထိုင်သင်တာဗျ။ကျွန်တော်ညာဘက်ဘေးမှာ သူ။ ဘယ်ဘက်ဘေးမှာ ယောက်ျားလေးရှိတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ နောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ ပုံစံမြင်အောင်ပြောပြတာပါ။
တစ်နေ့ကျတော့ ဘယ်ကဘယ်လို စဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ ဒူးခေါင်းအပေါ်ကနေ လက်ငါးချောင်းနဲ့ ပွတ်ရင် ယားတယ် မယားဘူးဆိုတာပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ဒူးခေါင်းလေးကို သွားပွတ်လိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို "အကို့ ယားတယ် မနေတတ်ဘူး" လို့ တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ တိုးတိုးလေးမှ တကယ့်တိုးတိုးလေး။ မပွင်တပွင့်လေးဗျ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လက်ဖဝါးတစ်ခုလုံးကို ဒူးအပေါ်ကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဒူးကောက်ကွေးနောက်ကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ သူကလည်း ဘာမှမပြောတော့ဘဲ စာအုပ်ကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ညာဘက်လက်က သူ့ဘယ်ဒူးခေါင်းအပေါ်ကအုပ်ပြီး ပွတ်ပေးနေတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေမသိအောင်လည်း ဟန်မပျက်နေနေရတာပေါ့။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူကငြိမ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်တာပေါ့။ ပထမ သူ့ခြေသလုံးသားလေးကို ထမီအပေါ်ကနေပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ ထမီကလည်း အပျော့စလေးဗျ။ အခြေအနေက ok နေတော့ ထမီစကို အသာလေးမပြီးလက်ကိုအောက်ကနေလျှိုသွင်းလိုက်တယ်။ သူ့ခြေသလုံးသားနဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဖဝါးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လိုက်ရတယ်။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်ကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတယ်။ နှာသီး ဖျားမှာ ချွေးလေးတွေစို့လို့။ ကျွန်တော်လည်း မသိသလိုနဲ့ ပေါင်အရင်းပိုင်းနားထိတိုးပြီး အတွင်းသားလေးတွေကို ဆက်ပွတ်ပေးနေတယ်။ သူ့ပိပိလေးအပေါ်ကိုတော့ လက်သန်းလေးနဲ့မထိခလုပ် ထိခလုပ်ပေါ့။ အဲဒီနေ့က အချိန်စေ့တဲ့ထိ အဲဒီအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရတယ်။ နောက်နေ့အကြောင်း ဆက်ရေးမယ်ဗျာ။ ဖတ်လို့အဆင်ပြေရင် အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။
Posted by okkala net at 6:39 AM